We inotsigira hurongwa duku muhwezva uye kuti mamwe kuitira MOQ ndiyo 1000. Price riri hachichinjiki. wako uwandu uye OEM pamwe LOGO wako uye ruvara pachako bhokisi MOQ ndiye 3000.
Hongu, tine simba uye kutanga RD chikwata. The zvigadzirwa zvinogona customized sezvawakachitarira chikumbiro.
Nokuti mimwe, kutungamirira nguva anenge 1 zuva. Nokuti vakawanda kugadzira, kutungamirira nguva rakakomberedza mazuva 7 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Kutungamirira nguva vanobudirira kana (1) zvatakawana dhipoziti wako, uye (2) tine chokupedzisira mvumo yenyu zvinhu zvenyu. Kana kwedu kutungamirira nguva haashandi wava yako, tapota endai pamusoro wako zvinodiwa wenyu nokutsigira Sale webasa. Muzviitiko zvose tichaedza achengete zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuita kudaro.
Unogona kuita mari yedu akaundi, Western Union kana PayPal.
1 gore Macverin vose zvigadzirwa mutsetse kubva musi ainge atumirwa inivhoyisi.
Hongu, isu nguva dzose kushandisa yepamusoro ekisipoti kavha. Nesuwo kushandisa njodzi chiputiriso zvinhu ngozi uye yakasimbiswa chando okuchengetera shippers kuti tembiricha tisanzwe zvinhu. Mazvikokota kavha uye non-mureza chiputiriso zvinodiwa vanogona kutongerwa chimwezve mutariri. Uyewo tinopa vatakuri zvose dziripo zvaunogona kusarudza.
Tapota taura nesu kuwana mamwe mashoko ane Apex uye ngatirambei vazive preferrence wako shippment nzira. Best chipo achatumirwa kwamuri ASAP.